WordPress Omenala Ndabere
Tinye Ntọala Omenala na WordPress 3
Friday, July 8, 2011 Saturday, October 29, 2011 Douglas Karr
Nke ọnwa a .net magazine bịarutere na nnukwu ngalaba na atụmatụ WordPress 3. Otu n’ime njirimara a bu ikike igbanwe onodu ogugu gi n’elu isiokwu gi. Koodu ahụ dị mfe. Na faịlụ gị function.php faịlụ, tinye usoro ndị a:
Ọ bụrụ na isiokwu gị enweghị faịlụ function.php isiokwu, gbakwunye otu! Ọ bụ faịlụ ndabere ederede WordPress ga-etinye na-akpaghị aka. Nsonaazụ gwụchara bụ na ị nwere nhọrọ nchịkọta nhọrọ azụ na ngalaba Ọdịdị nke nlekọta:
Nzọụkwụ 10 iji wulite atụmatụ B2B Twitter ka mma